अनियमित बिजुलीले गर्मीमा जनजीवन कष्टकर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौँ । नेपालगञ्जवासीले तातो हावा र चर्को गर्मी झेलिरहेका छन् । घरभित्र पनि आरामसँग बस्न सक्ने अवस्था छैन । विद्युत् अनियमितता उस्तै छ । चर्को गर्मीमा विद्युत्मात्रै नियमित भइदिने हो भने धेरै राहत हुन्थ्यो ।
विद्युत् नियमितताका लागि पहल पनि भइरहेको छ । तर, चर्को गर्मीका बेला विद्युत् अनियमितता झन् बढ्दै गएको छ । प्रत्येक वर्ष गर्मीमा हुने अनियमितताको समस्या यस वर्ष पनि समाधान भएको छैन । कहीँकतै मर्मत गर्नुपरे नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले विद्युत् अनियमित हुने समयको जानकारी दिन्छ । तर, त्यसबाहेक हुने अनियमितताको सूचना प्राधिकरणले दिने गरेको छैन।
“दिनभर गर्मीमा काम गर्छौ, विद्युत् गइरहँदा राम्रोसँग सुत्नसमेत पाइएको छैन”, अटोरिक्सा चालक दिनेश काँदु भन्छन्। एक घण्टामा दुई/तीन पटकसम्म विद्युत् काटिने गरेको रुस्तम अली बताउँछन् । “कम्तीमा लोडसेडिङको जानकारी भए त्यसैअनुसार योजना बनाउन सकिन्थ्यो”, उनी भन्छन् । पूर्वसूचनाविना हुने विद्युत् अनियमितताले मेसेनरी औजारमा पनि क्षति पुग्ने गरेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन्।
जेनेरेटरको प्रयोग गर्दा आउने लागतका कारण अनावश्यक नोक्सानी व्यहोर्नुपरिरहेको होटल व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालगञ्जका लागि भारत र नेपाल दुवै तर्फबाट विद्युत् आपूर्ति हुने गरेको छ । गर्मीमा नेपालगञ्जमा २४ एमभीएसम्मको विद्युत् माग हुने गरेको छ।
जसमा १२ एमभीएसम्मको विद्युत् भारतबाट प्राप्त हुने गरेको छ । ह्वात्तै बढ्ने माग र आपूर्तिको कमीले विद्युत् अनियमित हुने गर्छ। वर्षा नहुँदासम्म यहाँको तापक्रम घट्ने सम्भावना देखिँदैन । विद्युत् नियमित नहुँदा उखरमाउलो गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ।
दिनहुँ घण्टौँसम्म बिजुली हुँदैन । लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनिए पनि दैनिक तीन/चार घण्टा बत्ती गइरहेको छ । औषतमा यहाँको तापक्रम ४२ डिग्री सेल्सियस आसपास नै हुन्छ । छिटपुट पानी परे पनि वर्षा भएको छैन, स्थानीयवासी गर्मीले आक्रान्त छन्। गर्मी बढेसँगै खरबुजा, काँक्रा, उखुको रस, लस्सीलगायतका पेयपदार्थको व्यापार फस्टाएको छ ।
गर्मीका कारण आवश्यक कामबाहेक मध्य दिउँसो सडकमा मानिसको चहलपहल पातलिएको छ । बाहिर हिँड्दा गर्मी र त्यसमा पनि ‘लु’ चल्ने भएपछि सडकमा मानिसको आवतजावत कम भएको छ । दैनिक मजदुरी गरेर खानेहरुका लागि गर्मीयाम निकै कष्टकर बन्न पुगेको छ ।
प्रायःजसो युवायुवती गर्मी छल्न विभिन्न उद्यान, हरियाली स्थानमा पुग्ने गरेका छन् । अस्पताल तथा निजी क्लिनिकमा बिरामीको चाप बढेको छ । अन्य मौसमको तुलनामा गर्मीमा ५० प्रतिशतले बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि भएको विभिन्न अस्पतालले जनाएका छन् । गर्मीसँगै हावाहुरी र धुलो, सडकपेटी तथा फुटपाथको खाना र फोहर पानीका कारण बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको चिकित्सकले बताएका छन् ।
भाइरल, झाडापखाला, रुघाखोकी, पिसाब सङ्क्रमण, जलवियोजनलगायतका बिरामीको सङ्ख्या बढेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका चिकित्सक प्रकाश गुप्ताले गर्मीसँगै वर्षायाम शुरु हुन लागेकाले सवाधानी नअपनाइए मलेरिया, डेंगुजस्ता रोगले प्रभावित पार्न सक्ने बताए । ओपिडी सेवाको लागि मात्र दैनिक १५० भन्दा बढी बिरामी आउने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
यस्तै बाँकेको भेरी अस्पताल, कोहलपुर मेडिकल कलेज, बैष्णवी, वस्टर्नलगायतका दर्जन बढी अस्पताल तथा निजी क्लिनिकमा बिरामीको चाप उस्तै छ। चिकित्सकका अनुसार बाटो तथा फुटपाथको खाजा, नास्ता नखाने, पानी उमालेर अथवा फिल्टर गरेर पिउने, दिसापिसाब गरिसकेपछि साबुनपानीले हात धुने, सफासुग्घर गर्ने बानीको विकास गरेमा बिरामी हुनबाट जोगिन सकिन्छ।
नेपालगञ्जका अस्पतालमा प्रदेश नं ५, साविक सुदूर र कर्णाली प्रदेशका साथै भारतका विभिन्न स्थानबाट पनि दैनिक बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । “तीमध्ये अधिकांश भाइरल र टाइफाइडका छन्”, भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा रुपानन्द अधिकारीले भन्नुभयो, “भर्ना भएका बिरामीमा पनि आधाभन्दा बढी भाइरल ज्वरो र टाइफाइडकै छन् ।” उनका अनुसार बालबालिकादेखि युवायुवती र वृद्धवृद्धासमेत प्रभावित भएका छन् ।